चाइना कटिङ र एनग्रेभिङ लेजर मोड्युल हेड, रातो लेजर डायोड निर्माता, फाइबर कपलिंग लेजर आपूर्तिकर्ता - गुआंग चुआंग फेंग
निलो लेजर डायोड
हरियो लेजर डायोड
रातो लेजर डायोड
लेजर मोड्युल हेड
काट्ने र उत्कीर्ण लेजर मोड्युल हेड
स्पेस युग्मन लेजर मोड्युल हेड
फाइबर युग्मन लेजरहरू
R&D मा फोकस गर्दै, घरेलु लेजर नक्काशी र औद्योगिक लेजर प्रकाश स्रोतहरूको उत्पादन र निर्माण
हाम्रो अनुभवी R&D टोलीलाई धन्यवाद, हामी ग्राहकको विभिन्न आवश्यकताहरू अनुसार अनुकूलित उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
लेजर उत्कीर्णन, लेजर चरण प्रकाश, बायोमेडिकल, प्रकाश, औद्योगिक सेन्सर
हाम्रा लेजर उत्पादनहरूले 375nm ~ 1064nm कभर गर्दछ, र हामी स्पेस कपलिंग र फाइबर कपलिंग दुवैको साथ बहु-बीम संयोजनमा राम्रो छौं।
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड एक उच्च-टेक उत्पादन बिक्री, मार्केटिङ, पूर्व बिक्री र बिक्री पछि प्राविधिक सेवाहरू एकीकृत गर्ने कम्पनी हो। कम्पनी 2018 मा स्थापित भएको थियो, दृश्य लेजर प्रकाश स्रोत उत्पादनहरु र समाधान मा ध्यान केन्द्रित। कारखाना 2020 मा स्थापना भएको थियो, R&D, उत्पादन र घरेलु लेजर उत्कीर्णन र औद्योगिक लेजर प्रकाश स्रोतहरूको निर्माणमा केन्द्रित। कम्पनीले धेरै निर्माता र एजेन्टहरूसँग दीर्घकालीन र स्थिर सहकारी सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। कम्पनीको व्यवसायले मुख्यतया लेजर डायोड, काटन र उत्कीर्ण लेजर मोड्युल हेड, फाइबर कपलिंग लेजर, लेजर ड्राइभर, र लेजर सुरक्षात्मक चश्माको क्षेत्रहरू समेट्छ। एकै समयमा, कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अप्टिकल आकार समाधान र उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्छ।
5W फोकल समायोज्य लेजर मोड्युल
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लि। 5W फोकल समायोज्य लेजर मोड्युलको एक पेशेवर निर्माता हो। 5W फोकल समायोज्य लेजर मोड्युल निर्माणमा हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञता विगत 3+ वर्षहरूमा सम्मानित गरिएको छ। हामी 5W फोकल समायोज्य लेजर मोड्युल3वर्ष भन्दा बढीको लागि निर्माणमा संलग्न छौं। यो लचिलो रूपमा काटन र उत्कीर्णन लागि प्रयोग गरिन्छ। यो उत्कीर्णन मेसिन र 3D प्राइटर संग उपयुक्त छ। हामी तपाईंको अनुकूलता समस्याहरू समाधान गर्न लचिलो समाधानहरू प्रदान गर्दछौं। तरंग दैर्ध्य 450nm छ, जुन लेजर उत्कीर्णन र काटन को लागी एक प्रभावकारी उपकरण हो। तिनीहरूले विभिन्न सामग्रीहरू खोद्न र काट्न सक्छन्। यो उच्च गति र उच्च स्थिरता भएको व्यावसायिक लेजर हेड हो। हामीबाट 5W फोकल समायोज्य लेजर मोड्युल किन्नको लागि स्वागत छ।
10W मिनी-आकार लेजर मोड्युल
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लि। 10W Mini-size लेजर मोड्युलको व्यावसायिक निर्माता हो। 10W Mini-size लेजर मोड्युल निर्माणमा हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञता विगत 3+ वर्षहरूमा सम्मानित भएको छ। हामी 10W Mini-size लेजर मोड्युल निर्माणमा संलग्न छौं। यो उत्कीर्णन मेसिन र 3D प्रिन्टर संग उपयुक्त छ। हामी तपाईंको अनुकूलता समस्याहरू समाधान गर्न लचिलो समाधानहरू प्रदान गर्दछौं। तरंग दैर्ध्य 450nm छ, जुन लेजर उत्कीर्णन र काटन को लागी एक प्रभावकारी उपकरण हो। तिनीहरूले विभिन्न सामग्रीहरू खोद्न र काट्न सक्छन्। यो उच्च गति र उच्च स्थिरता संग व्यावसायिक लेजर हेड हो। हामीबाट 10W मिनी-साइज लेजर मोड्युल किन्न स्वागत छ।
5W फोकल निश्चित लेजर मोड्युल
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लि। 5W फोकल निश्चित लेजर मोड्युल को एक पेशेवर निर्माता हो। शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड निर्माणमा हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञता। विगत 3+ वर्षहरूमा सम्मानित गरिएको छ। हामी3वर्ष भन्दा बढीको लागि 5W फोकल फिक्स्ड लेजर मोड्युल निर्माणमा संलग्न छौं। यसले 20mm को लागि फोकस निश्चित गरेको छ। स्टेनलेस स्टील, प्लाईवुड, एक्रिलिक र MDF मा सजिलैसँग खोद्न। यो उत्कीर्णन मेसिन र 3D प्रिन्टर संग उपयुक्त छ। हामी तपाईंको अनुकूलता समस्याहरू समाधान गर्न लचिलो समाधानहरू प्रदान गर्दछौं। तरंग दैर्ध्य 450nm छ, जुन लेजर उत्कीर्णन र काटन को लागी एक प्रभावकारी उपकरण हो। तिनीहरूले विभिन्न सामग्रीहरू खोद्न र काट्न सक्छन्। यो उच्च गति र उच्च स्थिरता संग व्यावसायिक लेजर हेड हो। हामीबाट 5W फोकल निश्चित लेजर मोड्युल किन्न स्वागत छ।
हाम्रो उत्पादनहरू जस्तै काट्ने र उत्कीर्णन लेजर मोड्युल हेड, रातो लेजर डायोड, फाइबर युग्मन लेजर वा मूल्य सूची बारे सोधपुछको लागि, कृपया हामीलाई तपाईंको इमेल छोड्नुहोस् र हामी 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा हुनेछौं।
निलो फाइबर युग्मन लेजर
यो नीलो फाइबर युग्मन लेजर हो। हाम्रो फाइबर युग्मन लेजरहरु 445nm ~ 470nm तरंगदैर्ध्य दायरा 60um, 100um, 200um, 400um र 800um चयन कोर व्यास संग, लेजर शक्ति 5W बाट 40W सम्म छ। ग्राहकहरु बाट हरेक अनुरोध २४ घण्टा भित्र जवाफ दिइन्छ।
हरियो फाइबर TEC संग युग्मन लेजर
यो टेक संग हरियो फाइबर युग्मन लेजर हो। हाम्रो फाइबर युग्मन लेजरहरु 525nm तरंगदैर्ध्य दायरा 60um, 100um, 200um, 400um र 800um चयन कोर व्यास संग, लेजर शक्ति 2W देखि 4W सम्म छ। पेशेवर हरीयो फाइबर युग्मन लेजर TEC निर्माण संग , हामी तपाइँ TEC संग हरियो फाइबर युग्मन लेजरहरु प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ। र हामी तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो बिक्री पछि सेवा र समयमै डेलिभरी प्रदान गर्नेछौं।
नक्काशी मिसिन लागि 10W लेजर मोड्युल
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड नक्काशी मेसिनको लागि 10W लेजर मोड्युलको एक पेशेवर निर्माता हो। नक्काशी मेसिनको लागि 10W लेजर मोड्युल निर्माणमा हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञता विगत 3+ वर्षहरूमा सम्मानित गरिएको छ। हामी3वर्ष भन्दा बढीको लागि 10W लेजर मोड्युल उत्कीर्णन मेसिनको निर्माणमा संलग्न छौं। यो उत्कीर्णन मेसिन र 3D प्रिन्टर संग उपयुक्त छ। हामी तपाईंको अनुकूलता समस्याहरू समाधान गर्न लचिलो समाधानहरू प्रदान गर्दछौं। तरंग दैर्ध्य 450nm छ, जुन लेजर उत्कीर्णन र काटन को लागी एक प्रभावकारी उपकरण हो। तिनीहरूले विभिन्न सामग्रीहरू खोद्न र काट्न सक्छन्। यो उच्च गति र उच्च स्थिरता संग व्यावसायिक लेजर हेड हो। हामीबाट नक्काशी मेसिनको लागि 10W लेजर मोड्युल किन्न स्वागत छ।
3D प्रिन्टरको लागि 10W लेजर मोड्युल
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लि। 3D प्रिन्टरको लागि 10W लेजर मोड्युलको व्यावसायिक निर्माता हो। 3D प्रिन्टरका लागि 10W लेजर मोड्युल निर्माण गर्ने हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञता विगत ३+ वर्षहरूमा सम्मानित भएको छ। हामी ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि थ्रीडी प्रिन्टरका लागि १०W लेजर मोड्युल निर्माणमा संलग्न छौं। हामी तपाईंको अनुकूलता समस्याहरू समाधान गर्न लचिलो समाधानहरू प्रदान गर्दछौं। तरंग दैर्ध्य 450nm छ, जुन लेजर उत्कीर्णन र काटन को लागी एक प्रभावकारी उपकरण हो। तिनीहरूले विभिन्न सामग्रीहरू खोद्न र काट्न सक्छन्। यो उच्च गति र उच्च स्थिरता संग व्यावसायिक लेजर हेड हो। हामीबाट 3D प्रिन्टरको लागि 10W लेजर मोड्युल किन्न स्वागत छ।
उच्च शक्ति ब्लू लेजर डायोड
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लि। उच्च शक्ति ब्लू लेजर डायोड को एक पेशेवर निर्माता हो। हाई पावर ब्लू लेजर डायोड उत्पादन गर्ने हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञतालाई विगत ३+ वर्षमा सम्मान गरिएको छ। तपाईं हाम्रो कारखानाबाट हाई पावर ब्लू लेजर डायोड किन्नमा ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंलाई बिक्री पछिको उत्कृष्ट सेवा र समयमै डेलिभरी प्रदान गर्नेछौं।
FAC स्क्वायरको साथ निलो लेजर डायोड
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लि। FAC स्क्वायर संग ब्लू लेजर डायोड को एक पेशेवर निर्माता हो। FAC स्क्वायरसँग नीलो लेजर डायोड निर्माण गर्ने हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञतालाई विगत ३+ वर्षहरूमा सम्मान गरिएको छ। FAC स्क्वायर निर्मातासँग एक पेशेवर ब्लू लेजर डायोडको रूपमा, हामी तपाईंलाई UV स्पेस कपलिंग लेजर मोड्युल प्रदान गर्न पाउँदा खुसी छौं। हामी तपाईलाई उत्कृष्ट बिक्री पछि सेवा र समयमै डेलिभरी प्रदान गर्न सधैं तयार छौं।
FAC रैखिक संग निलो लेजर डायोड
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड एफएसी लिनियरको साथ ब्लू लेजर डायोडको व्यावसायिक निर्माता हो। FAC Linear संग निलो लेजर डायोड निर्माण गर्ने हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञता विगत ३+ वर्षहरूमा सम्मानित भएको छ। हामीबाट FAC लिनियरसँग ब्लू लेजर डायोड किन्नको लागि स्वागत छ। ग्राहकहरु बाट प्रत्येक अनुरोध 24 घण्टा भित्र जवाफ दिइनेछ।
कोलिमेटिङ लेन्सको साथ निलो लेजर डायोड
शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड कोलिमेटिङ लेन्स भएको ब्लू लेजर डायोडको व्यावसायिक निर्माता हो। कलिमेटिंग लेन्सको साथ ब्लू लेजर डायोड निर्माणमा हाम्रो व्यावसायिक विशेषज्ञता विगत ३+ वर्षहरूमा सम्मानित गरिएको छ। निम्न कोलिमेटिङ लेन्सको साथ ब्लू लेजर डायोडको परिचय छ, हामी तपाईंलाई कोलिमेटिङ लेन्सको साथ ब्लू लेजर डायोडलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं। नयाँ र पुराना ग्राहकहरूलाई सँगै राम्रो भविष्य सिर्जना गर्न हामीसँग सहकार्य गर्न जारी राख्न स्वागत छ!
साधारण प्रकाश-उत्सर्जक डायोड र लेजर डायोडहरू बीच के भिन्नता छ?
लेजर डायोड प्रकाश बजार मा प्रवेश गर्न को लागी अपेक्षित छ?
के अर्धचालक लेजर भविष्य मा सामान्य प्रकाश को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ? अर्धचालक पराबैंगनीकिरण को ऊर्जा दक्षता १०० पटक वा परम्परागत LEDs को भन्दा पनि उच्च छ, त्यसैले यो एक सानो मरने आकार संग धेरै उच्च प्रकाश उत्पादन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। सीमित भौतिक आकार संग आवेदनहरु को लागी, अर्धचालक लेजर को आकर्षण स्पष्ट छ, तर सामान्य रोशनी को लागी उनीहरु को उपयोग को हानि हो कि उनीहरुको उत्सर्जन गुहा धेरै संकीर्ण छ।
लेजर डायोडको आधारभूत कार्य सिद्धान्त
हामीले लेजर डायोडको बारेमा कुरा गर्नु अघि, हामीले पहिले उत्तेजित विकिरण बुझ्नुपर्छ। प्रकाश विकिरणमा तीन विकिरण प्रक्रियाहरू छन्,
लेजर डायोडले साँघुरो बीमको प्रदीपनको तीव्रता बढाउँछ
LED र अर्धचालक लेजर (वा लेजर LED) ले समान रूपमा काम गर्दछ, त्यो हो, जब इलेक्ट्रोन र प्वालहरू पोलिमराइज हुन्छन्, प्रकाश उत्सर्जित हुन्छ, र यसको उत्सर्जन तरंगदैर्ध्य प्रयोग गरिएको सामग्रीमा निर्भर गर्दछ। फरक यो हो कि एलईडी प्रकाशको वर्णक्रमीय दायरा अपेक्षाकृत साँघुरो छ,
लेजर डायोड को प्रदर्शन र आवेदन
लेजर डायोडलाई अर्धचालक लेजर पनि भनिन्छ, जसलाई सामान्यतया LD भनिन्छ। अर्को, लेजर डायोडको प्रदर्शन विशेषताहरू र अनुप्रयोगहरू हेरौं।
Addभवन बी, RONGDE इन्टरनेशनल, लङ ग्याङ जिल्ला, शेन्जेन, चीन
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 शेन्जेन गुआंग चुआंग फेंग टेक्नोलोजी कं, लि। सबै अधिकार सुरक्षित।